Loogu talagalay Guryaha Iskuulka - Iskuullada Hore ee Colorado
CEC Loogu Talo Galay Iskuulleyda Guryaha
Kulliyadaha Hore ee Colorado (CEC) waxay siisaa qoysaska guriga ee ku yaala kambaska iyo fursadaha waxbarshada onlaynka ah si ay u kordhiyaan oo ay u kobciyaan manhajka ardaygooda iyada oo loo marayo fursadaha diiwaangelinta PART-TIME ee lacag la'aanta ah.
DHAMMAAN Xarumaha CEC iyo goobaha tooska ah ee Kulliyadayada waxay bixiyaan diwaan galinta PART-TIME ee dugsiyada guriga iyo ardayda aan dawliga ahayn si ay u dhammaystiraan koorsooyinka asaasiga ah, shaybaadhka, iyo kuwa la doortay si ay u kabaan manhajkooda, oo lagu daro, helitaanka koorsooyinka kuleejka ee ay bixiyaan Shuraakadayada Kulliyada La aqoonsan yahay.
Akadeemiyada Iskuulka ee Everest Point
My Tech Sare
Qoysaska dugsiga guriga ee xiisaynaya barashada khadka tooska ah, My Tech High waxaa laga heli karaa CEC, taasoo ardayda K-12 ee da'doodu u dhaxayso 5-18 siisa inay helaan waxbarasho dheeri ah oo gaar ahaan loogu talagalay xiisahooda, baahiyahooda iyo xirfadahooda - oo muujinaya koorsooyin online ah oo mashruuc ku salaysan oo ku saabsan Ganacsiga iyo Ganacsiga , Cybersecurity, Warbaahinta Dijital ah & Farshaxanka, Barnaamijyada & Ciyaaraha, iyo Robotics & Engineering. Ardaydu waxay xaq u leeyihiin gunnada tignoolajiyada si ay u dabooshaan kharashaadka kombayutarka iyo gelitaanka internetka. Booqo co.mytechhigh.com si aad wax badan uga barato oo aad isu diiwaan geliso.
Tag Farsamadayda Sare